Nilaza i Malta fa Herd Immunity, manokatra fizahan-tany ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Malta » Nilaza i Malta fa Herd Immunity, manokatra fizahan-tany ho an'ireo mpitsidika iraisam-pirenena
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Malta • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Editorial • Vaovaom-panjakana • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ra Malta amin'ny satro-boninahitra
Herd Immunity dia mety ho teny majika vaovao rehefa manokatra indray ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Ny ministeran'ny fizahan-tany any Maltas dia izao no mitaky ny Herun Immunity, inona ny dingana feno fahasahiana - saingy azo antoka sy marina ve ny milaza izany?
Malta dia firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ary Firenena Islandy ao amin'ny Ranomasina Mediterane. Ny fizahantany dia iray amin'ireo sehatr'asa lehibe indrindra ao Malta.
Raha ny ankamaroan'ny Eropa dia manana tahan'ny vaksiny miadana, fanidiana ary famerana, maro no mitady toeran-kaleha ao amin'ny Vondrona Eropeana izay misy fetra tsy azo ferana sy mahafinaritra kokoa. Te ho tonga amin'ity firenena ity i Malta ary manana teny majika: Herd Immunity Achieved!
Ny isa amin'ny vaksinin'i Malta dia tsara fa tsy ny avo indrindra eto an-tany. Tsy nisy firenena maneran-tany nilaza fa voan'ny hery fiarovan-tena. Malta no voalohany eto ary mety antenaina ny faritra hafa manana isa fanaovana vaksiny mitovy na avo kokoa dia handika ny teny hoe Herd Immunity ho azy ireo.
Mety ve sa tsy tompon'andraikitra ny filazan'i Malta ny Herd Immunity?
Araka ny fanambarana an-gazety niparitaka tany Alemana, i Malta no firenena voalohany tao amin'ny Vondrona Eropeana nahatratra ny tsimatimanota aman-tànan'ny mponina tao amin'ny valanaretina COVID-19. Roa herinandro lasa izay, ny nosy Mediteraneana dia nanjary firenena voalohany tao amin'ny vondrona eropeana nanomboka ny fanaovana vaksinin'olona mihoatra ny 16 taona. Tamin'ny alatsinainy Whit, 24 Mey, dia nahatratra voalohany ny tsy fananan-kery teo amin'ny mponina niaraka tamin'ny 70 isan-jaton'ireo nanao vaksiny. 42 isan-jaton'ny mponina no efa manana fiarovana amin'ny vaksiny feno aorian'ny fatra faharoa.
Araka ny John Hopkins Bloomberg School, Herd Immunity dia azo faritana rehefa tsy voan'ny areti-mifindra ny ankamaroan'ny mponina, izany dia miaro ankolaka - na fiarovana ny isan'ny mponina (antsoina koa hoe fiarovana ny omby na fiarovana omby) - ho an'ireo izay tsy voaro amin'ny ny aretina.